Miseensonni kaabinee naannoo Oromiyaa ammaa eenyufaadha? - | - OBN
Miseensonni kaabinee naannoo Oromiyaa ammaa eenyufaadha?
[Dhrtvo 14 02 2009]Caffeen Oromiyaa walga'ii ariifachiisaa 2ffaa bara hojii 5ffaa waggaa lammaffaa Sanbataa fi Dilbata (Onkololeessa 12 -13,2009tti) gaggeessen obbo Lammaa Magarsaa preezdaantii naannichaa gochuun muudera.
Haaluma kanaan isaanis kaabinee naannichaa Caffichaaf dhiyeessuun raggaasifataniiru.
Muudamtoota 21 keessaa 16 haaraa fi kaabinee keessa kan hin turre.
Kanneen keessaammoo miseensa DhDUO kan hin taane 8. Muudamtoonni kanneen hojii qorannoo fi qo'annaarratti kan bobba'ani.
Nutis seenaa jireenya isaanii akkanaan isinii dhiyeessineerra.
Obbo Umar Huseen Ubbaa
Itti aanaa preezdaantii
Bakki dhalootaa; Godina Arsii
Qophaa'ina Barnootaa; Digrii jalqabaa diinagdeen, digrii lammaffaa Infoormeeshinaal biiznas
Muuxannoo hojii; Godina Arsiitti itti gaafatamaa waajjira maallaqaa fi misooma diinagdee, itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaa fi sadarkaawwan hoggansaa addaddaarratti hojjechaa turaniiru
Bulchaa godina Arsii; biiroo maallaqaa fi misooma diinagdee fi biiroo daldalaa fi misooma gabaatti itti aanaa ta'uun tajaajilaniiru.
Sadarkaa itti aanaa preezdaantiitti itti gaafatamaa biiroo qonnaa,
Yeroo ammas sadarkaa itti aanaa preezdaantiitti itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii ta'uun hojjechaa turan.
Koree jiddu galeessa DhDUO ta'uunis muuxannoo baroota dheeraa qabu.
Sadarkaa itti aanaa preezdaantiitti itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii
Iddoo dhalootaa; Jimma
Qophii barnootaa; digrii jalqabaa koompiiwtar injiinariing, digrii lammaffaa traanisfoormeeshinaal liidarshiippii fi cheenjii; maastars iin biiznas admiiniistireeshin, akkasumas kriiptoograafiin kan qaban yammuu ta'u, piis eend sakkiyuuriitiin digrii 3ffaa isaanii hordofaa jiru.
Muuxannoo hojii; Raayyaa ittisaatti amma sadarkaa leeftinaant koloneelaa tajaajilaniiru; daayreektara wiirtuu qorannoo saayinsii fi teeknooloojii federaalaa, INSAtti daayreektara olaanaa ta'uun, yeroo ammaas ministira Saayinsii fi teeknooloojii ta'uun tajaajilaa turan.
Obbo Abiyy Mahaammad miseensa koree jiddu galeessaa DhDUOsi.
Obbo Silashii Geetaahuun
Lafa dhalootaa; Harargee Bahaa
Barnoota; Agrikaalcharaal injiinariingiin digrii jalqabaa fi 2ffaa qabu.
Muuxannoo; Yuunvarsiitii Jimmaatti barsiisaa ta'uun yeroo dheeraaf tajaajilaniiru.
Abbaa taayitaa misooma jallisii keessatti ogeessa jallisii olaanaa, ministeera qonnaa fi qabeenya uummamaatti daayreektara olaanaa fi minister deettaa ta'uun tajaajilaniiru. Yeroo ammaas ministira bineeldotaa fi qabeenya qurxummii ta'uun tajaajilaa turaniiru.
Miseensa koree jiddu galeessaa DhDUsi.
Obbo Tolosaa Gaddafaa
Itti gaafatamaa biiroo walta'umsa maallaqaa fi diinagdee
Lafa dhalootaa; Horroo Guduruu Wallaggaa
Barnoota; Digrii jalqabaa fi lammaffaa ikoonoomiksiin
Muuxannoo; itti gaafatamaa waajjira maallaqaa fi misooma diinagdee godinaa, itti aanaa itti gaafatamaa biiroo maallaqaa fi misooma diinagdee fi itti gaafatamaa ta'uun tajaajilaniiru.
Itti aanaa hoji gaggeessaa koorporeeshinii sukkaaraa ta'uunis hojjetaniiru.
Yeroo ammaas ministir deettaa dhaabbilee misooma mootummaa turan.
Miseensa koree jiddu galeessaa DhDUOsi.
Obbo Birhaanuu Tsaggaayee
Itti gaafatamaa biiroo haqaa
Dhaloota; Shawaa kibba lixaa
Barnoota; Digrii jalqabaa fi 2ffaa hoggansaan
Muuxannoo; Harargee bahaatti itti gaafatamaa waajjira haqaa fi bulchiinsaa, Shawaa kibba lixaatti itti gaafatamaa waajjira koomuniikeeshinii, itti aanaa biiroo haqaa, ministir deettaa ministeera haqaa ta'uunis tajaajilaniiru.
Biiroo koonistiraakshiniitti itti gaafatamaa turan.
Itti gaafatamaa biiroo fayyaa
Barnoota; Digrii jalqabaa meedikaal dooktar, digrii lammaffaa intarnaashinaal heelz
Muuxannoo; Meedikaal daayreektara hoospitaalaa, biiroo fayyaatti hoji gaggeessaa hordoffii karooraa fi baajataa, gorsaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa, yeroo ammaas itti aanaa itti gaafatamaa biiroo fayyaa ta'uun tajaajilaa turan.
Dooktar Hasan Yasuuf
Itti gaafatamaa abbaa taayitaa bosonaa fi eegumsa naannoo
Dhaloota; Wallagga bahaa
Barnoota; digrii jalqabaa plaant saayins, digrii lammaffaa boottaaniikaal saayinsii fi develoopmantaal stadiis, akkasumas maaneejimantii naachuraal riisoorsin digrii dooktareetaa qabu.
Muuxannoo; Jiddu gala qorannoo qonnaa Baakootti qorataa ta'uun, Yuunvarsiitii Wallaggaatti itti gaafatamaa qorannoo fi tajaajila hawaasummaa ta'uun tajaajilaniiru. Yuunvarsiitii Wallaggaatti itti aanaa Preezdaantii ta'uun tajaajilarra jiran.
Dooktar Tashoomaa Addunyaa
Itti gaafatamaa koomiishinii karooraa fi misooma diinagdee
Barnoota; digrii jalqabaa ikoonoomiksii akkasumas 2ffaa fi 3ffaa develoopmantaal ikoonoomiiks, barnoota waliigalaatin sadarkaa gargaaraa proofeesaraarra ga'aniiru.
Muuxannoo; Biiroo fayyaatti ogeessa proojaktii, yeroo ammaas yuunvarsiititti daayreektara tajaajila hawaasummaa fi barsiisummaan tajaajilarra jiran.
Obbo Haabtaamuu Haaylamiikaa'eel
Itti gaafatamaa biiroo dargaggoo fi ispoortii
Bakki dhalootaa; Iluu Abbaabooraa
Barnoota; orgaanaayzeeshinaal maaneejimantii fi liidarshiippii, akkasumas digrii jalqabaatin agriikaalcharaal ikoonoomiksii barataniiru.
Muuxannoo; Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa, bulchaa aanaa Yaayyoo, bulchaa Shawaa kibba lixaa, kantiibaa magaalaa Shaashamannee ta'uun yeroo dheeraaf, yeroo ammaas kantiibaa magaalaa Adaamati.
Injiinar Birhaanuu Baqqalaa
Itti gaafatamaa biiroo koonistiraakshinii
Dhaloota; Arsii lixaa
Barnoota; Agrikaalcharaal injiinariingiin digrii jalqabaa; kan 2ffaa haydirooliiks injiinariingiin
Muuxannoo; Abbaa taayitaa misooma jallisii Oromiyaatti godinaalee 4tti itti gaafatamummaan hojjetaniiru.
misooma jallisiitti injiinara olaanaa, intarpiraayizii hojiiwwan bishaanii Oromiyaatti itti aanaa hoji gaggeessaa, itti gaafatamaa abbaa taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa, itti gaafatamaa intarpiraayizii ijaarsa daandiiwwanii ta'uun tajaajilaa turaniiru.
Ammammoo daayreektara qindeessaa hojiiwwan misoomaa ta'uun tajaajilaa turan.
Gargaaraa koomiishinaraa Dammallaash G/mikaa'eel
Itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa
Dhaloota; Shawaa lixaa
Barnoota; Digrii jalqabaa saayinsii poolisiin akkasumas digrii lammaffaa saayinsii gaggeessummaa fi pabliik administireeshiniin fudhataniiru.
Muuxannoo; Naannichatti aanarraa kaasee amma naannootti hoggansa poolisummaan, koomiishinara koomiishinii poolosii Oromiyaa, akkasumas daayreektara ittisa yakkaa koomiishinii poolisii federaalaa ta'uun tajaajilaniiru.
Amma daayreektara olaanaa intarpiraayizii daandiiwwan kanfaltii ta'uun tajaajilarra turan.
Itti gaafatamtuu Biiroo aadaa fi tuuriizimii
Barnoota; Afaanin diippiloomaa, akkasumas seeran digrii jalqabaa qabu.
Muuxannoo; Itti gaafatamtuu waajjira tajaajila hawaasummaa, afa yaa'ii aanaa, bulchituu aanaa Dugdaa, itti aantuu koomiishinaraa koomiishinii ittisa balaa fi qophaa'ummaa, yeroo ammaas itti gaafatamtuu biiroo daldalaa fi misooma gabaa ta'uun tajaajilarra turan.
Obbo Asaffaa Kumsaa
Itti gaafatamaa biiroo bishaan albuudaa fi inarjii
Dhaloota; Horroo Guduruu Wallaggaa
Barnoota; Digrii jalqabaatin ji'ooloojiin, 2ffaan saayinsii ji'oo infoormeeshiniin qabataniiru.
Muuxannoo; hogganaa hojiiwwan proojaktoota misoomaa, itti gaafatamaa dhaabbata diizaayinii fi to'annoo hojiiwwan bishaanii, yeroo ammaas dhaabbata Neezarlaands keessatti argamu tokko keessatti daayreektara olaanaa ta'uun tajaajilarra jiru.
Aadde Aziizaa Ahimad
Itti gaafatamtuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii
Dhaloota; Harargee lixaa
Barnoota; digrii jalqabaa aappilaayid baayooloojiin, digrii 2ffaa maastars of biiznas administireeshiniin argataniiru.
Muuxannoo; Itti aantuu bulchaa aanaa Ciroo, biiroo godinaa, biiroo geejibaa fi abbaa taayitaa daandiiwwanii itti gaafatamtummaan hojjetaniiru. Dirree Dawaatti itti gaafatamtuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii ta'uun tajaajilaa turaniiru. Yeroo ammaas itti gaafatamtuu biiroo dargaggoo fi ispoortii ta'uun tajaajilarra turan.
Obbo Wandimmaagany Nagaraa
Itti gaafatamaa biiroo daldalaa fi misooma gabaa
Dhaloota; Qeellam Wallaggaa
Barnoota; Akkaawuntiingiin digrii jalqabaa fi 2ffaan biiznas liidarshiippiin fudhataniiru.
Muuxannoo; Maanaajara baankii daldala Ityoophiyaa damee Jimmaa, itti aanaa preezdaantii baankii daldala Ityoophiyaa fi preezdaantii baaknii hojiiwwan gamtaa Oromiyaa ta'uun tajaajilaniiru.
Obbo Kaasayee Abdiisaa
Itti gaafatamaa biiroo BLTO
Barnoota; Maaneejimantiin digrii jalqabaa, maaneejimantii BLTOn digrii 2ffaa qabu.
Muuxannoo; Barsiisummaan, suupparvaayzarii barnoota godinaa, diinii koolleejjota BLTO Adaamaa fi Ciroo, yeroo ammaas itti gaafatamaa eejansii mirkaneessa sadarkaa turan.
Obbo Birhaanuu Fayyisaa
Itti gaafatamaa waajjira preezdaantii
Dhaloota; Shawaa kaabaa
Barnoota; Ejukeeshinaal maaneejimantiin digrii jalqabaa, ejukeeshinaal plaaniingii fi liidarshiippiin digrii 2ffaa qabu.
Muuxannoo; Manneen barnootaa keessatti hoggansaan, biiroo bulchiinsaa fi nageenyatti ogeessa karooraa, ministeera eegumsa fayyaatti itti gaafatamaa dhiyeessii dawaa, hogganaa biiroo, yeroo ammaas ministeera eegumsa fayyaatti itti gaafatamaa biiroo ittisa HIV ta'uun hojjechaat turan.
Obbo Elemaa Qaamphee
Oodiitara olaanaa naannichaa
Barnoota; Digrii jalqabaa
Muuxannoo; Itti gaafatamaa waajjira barnoota godinaa, itti gaafatamaa waajjira maallaqaa fi misooma diinagdee godinaa, itti aanaa biiroo maallaqaa fi misooma diinagdee, akkasumas yeroo ammaa itti gaafatamaa biiroo maallaqaa fi walta'umsa diinagdee ta'uun tajaajilarra jiru.
Aadde Hiruut Birraasaa
Koomiishinara koomiishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa
Dhaloota; Wallagga lixaa
Barnoota; Seeran digrii jalqabaa
Muuxannoo; Finfinnee fi naannotti waajjira dhaabaa keessa yeroo dheeraaf, mana maree bakka bu'ootaatti walitti qabduu koree dhaabbii dhimma dubartootaa, itti gaafatamtuu waajjira haqaa bulchiinsa godina addaa naannawa Finfinnee, yeroo ammaammoo itti gaafatamtuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii ta'uun tajaajilaa turan.
Daayreektara dhaabbata televiizhinii fi raadiyoo Oromiyaa
Barnoota; Digrii jalqabaa maaneejimantiin, 2ffaammoo liidarshiippiin qabu.
Muuxannoo; Aanatti hogganaa ta'uun, Arsii, Baalee fi Arsii lixaatti hogganaa dhaabaa ta'uun, gorsaa biiroo misooma magaalaa fi indaastirii ta'uun, hogganaa gurmaa'ina siyaasaa bulchiinsa addaa naannawa Finfinnee ta'uun hojjechaa turan.
Yeroo ammaas itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuuriizimii Oromiyaa ta'uun tajaajilaa turan.
6054 Views 10/25/16